အင်ဆူလင် သိုလှောင်နည်းများ - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေးစင်တာ » ဆီးချိုသွေးချို » အင်ဆူလင် သိုလှောင်နည်းများ
ရေးသားသူ Kyaw Thura Htun ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. K Zin Thwe
အသုံးပြုလက်စအင်ဆူလင် တွေကိုအခန်းအပူချိန်မှာထားခြင်းကသူကိုအသုံးပြုတဲ့အခါပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ လက်ရှိမသုံးနေတဲ့အင်ဆူလင် တွေကိုတော့ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာသိမ်းတာအကောင်းဆုံးပါ။ သတိထားရမှာက အခဲခန်းထဲမထည့်ဖို့၊ ရေခဲခန်းအနားမထားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တချို့အင်ဆူလင် တွေကမတူညီတဲ့သိုလှောင်နည်းတွေလိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်အသုံးမပြုခင်သင့်ရဲ့လူနာစာရွက်ထဲကအချက်အလက်တွေကိုအရင်သေချာဖတ်ပါ။
အိမ်မှာ အင်ဆူလင် ကိုသိုလှောင်ဖို့ နည်းလမ်းများ
အင်ဆူလင် တွေကိုအပူနဲ့အလင်းရောင်ဝေးရာမှာထားပါ။ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ မထည့်ထားတဲ့ အင်ဆူလင် တွေကိုတတ်နိုင်ငမျှ အေးအောင်ထားပေးပါ။
အင်ဆူလင် တွေကိုဘယ်တော့မှမခဲသွားစေပါနဲ့။ တကယ်လို့ခဲသွားရင်မသုံးဘဲလွှင့်ပစ်လိုက်ပါ။ အရည်ပြန်ပျော်သွားချိန်မှာ လည်း ပြန်မသုံးပါနဲ့။
အသုံးမပြုရသေးတဲ့ အင်ဆူလင် ပုလင်းတွေ၊ အင်ဆူလင် ဆေးထိုးအပ်တွေကို ရေခဲသေတ္တာထဲသိမ်းထားပါ။ သူတို့ကိုသေချာသိုလှောင်ထားရင်အာမခံထားတဲ့ရက်အထိကြာကြာခံမှာပါ။
သင်လက်ရှိသုံးနေတဲ့ အင်ဆူလင် ဆေးထိုးအပ်တွေကိုအခန်း အပူချိန်မှာပဲထားပါ။
အင်ဆူလင် ဆေးထိုးအပ်အပိုနဲ့တခြားဆက်စပ်တာတွေကိုသူ့သက်ဆိုင်ရာထည့်စရာတွေနဲ့ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာပဲထည့်ထားပါ။ ဒါမှသာကုန်ဆုံးမယ့်ရက်ကိုသိနိုင်မှာပါ။
အင်ဆူလင် တွေကိုအရမ်း မပူသွားစေပါနဲ့။ ပူတတ်တဲ့အရာတွေနားမထားပါနဲ့။ နေရောင်တိုက်ရိုက်မပေးထိပါနဲ့။ တီဗွီ တို့ ကွန်ပျူတာတို့လို လျှပ်စစ်ကိရိယာတွေ ပေါ်မှာမတင်ပါနဲ့။ ပူတဲ့ရက်တွေမှာကားထဲ ချန်မထားခဲ့ပါနဲ့။ ထမင်းပေါင်းအိုးနဲ့ ဝေးဝေးထားပါ။
ခရီးသွားတဲ့အခါ အင်ဆူလင် သိုလှောင်ဖို့အချက်များ
အင်ဆူလင် ကိုအရမ်းပူ၊အရမ်းအေးတာမျိုးမဖြစ်စေပါနဲ့။ အပူချိန်မြင့်နေချိန်မှာ ကားထဲမထားခဲ့ပါနဲ့။
ဘတ်စ်၊ရထား၊ လေယာဉ်တွေနဲ့ခရီးသွားနေတဲ့အခါ အင်ဆူလင်၊ တခြားဆေးတွေနဲ့တခြားဆီးချိုအထောက်အကူပြုပစ္စည်းတွေကိုလက်ဆွဲအိတ်ထဲပဲထည့်ပါ။
လေဆိပ်လုံခြုံရေးကတစ်ဆင့်ဖြတ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ အင်ဆူလင် တွေကိုအညွှန်းအပြည့်အစုံပါတဲ့သက်ဆိုင်ရာဘူးထဲထည့်ထားပါ။ သင့်ဆရာဝန်ဆီကနေသင်ဟာဆီးချိုဆေးနဲ့တခြားအထောက်အကူတွေကိုသယ်ယူသွားရတယ်ဆိုတဲ့ ထောက်ခံစာတောင်းထားပါ။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဇူလိုင် 11, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း နိုဝင်ဘာ 14, 2019
http://www.ghc.org/healthAndWellness/?item=/common/healthAndWellness/conditions/diabetes/insulin Storage.html. Accessed June 23, 2015.
insulin storage. https://www.diabetes.org.uk/Guide-to-diabetes/Teens/Me- and-my- diabetes/Getting-my-glucose-right/insulinStorage/. Accessed June 23,2015.
https://www.diabetes.org.uk/Information-for-parents/Diabetes-care/insulin/Storing-insulin/.Accessed June 23, 2015.
အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့လုပ်မိနေတဲ့ သွေးတွင်းသကြားဓါတ် မြင့်တတ်စေနိုင်တဲ့ အရာလေးတွေ